Réponses pour «nahafinaritra»:
MISAOTRA MAHATSIARO 100%
Ny tonga tao an-tsaiko dia ny hiezaka hanandrana, hampiasa ny findaiko… Dia niantso ilay laharana… 1 Ny valiny voaray, tsy tena nahafinaritra :
10 ANDRO 2018 66%
Niaiky izy fa tena Lehibe sy Tsara tokoa Andriamanitra.” RONNIE NAIDOO, JOHANNESBURG, “Tena nahafinaritra SOUTH AFRICA tokoa ny fanandramana niainako nandritra ny Folo “Nandray anjara tsy tapaka Andro Fiaraha-mivavaka.
Tena nahafinaritra raha lazaina amin’ny teny iray ny lasy.Antenaina ny hitohizan’ny fifampizarana sy ny firahalahiana amin’ny fotoana ho avy rehetra.
2492. Nahafinaritra ny dia. 2493.
- nahafinaritra tokóa, hono, izány fankalazána ny faha-150 tsingerintaona izáy notontosaina tamin’ny volana Şepįtãbįra taona 1952 izány.
Nahafinaritra ny fahitána ny fomba no fiveloman’irény olombeloña irény.